Duulimaadyada cusub ee u dhexeeya Newark Liberty iyo Reagan National ee United hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada cusub ee u dhexeeya Newark Liberty iyo Reagan National ee United hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Adeegga cusub ee United ee u dhexeeya Gegida Diyaaradaha Caalamiga ah ee New York/Newark Liberty International Airport iyo Reagan National Airport waxa uu shaqayn doona todobo maalmood todobaadkii, iyada oo 18 duulimaad ay bixinayaan ku dhawaad ​​adeeg saacadle ah inta u dhaxaysa 6 subaxnimo iyo 10 galabnimo.
United ayaa ku dhawaaqday jadwal cusub oo u dhexeeya Newark Liberty iyo garoomada diyaaradaha Reagan National oo bilaabmaya Oktoobar 31-keeda oo leh laba-heer CRJ-550.
United hadda waxay samaysaa 32 safar maalintiiba inta u dhaxaysa NYC-aagga iyo DC, 78% ayaa kordhay iyo duullimaadyada ugu badan ee shirkad kasta.
Dhammaan duullimaadyada United ee ka imanaya NYC waxaa hadda maamuli doona diyaarado dual class ah, oo ay ku jiraan 737 MAX-8 cusub iyo CRJ-550 jet.
United Airlines ayaa ka dhigaysa safarka u dhexeeya magaalooyinka New York iyo Washington DC mid sahlan oo ka haboon, iyadoo maanta ku dhawaaqday inay bilaabayso adeeg cusub oo saacad ku dhow New York/Newark Liberty International Airport iyo Madaarka Qaranka ee Reagan Oct. 31, wuxuuna ku darayaa shan duulimaad oo cusub oo u dhexeeya Madaarka LaGuardia iyo Gegida Diyaaradaha ee Washington Dulles. Guud ahaan, United Airlines waxay ka shaqayn doontaa ilaa 32 duulimaad maalin kasta inta u dhaxaysa aagagga NYC iyo DC, korodhka 78% iyo duulimaadyada ugu badan ee shirkad kasta oo kale.
United Airlines waxay sidoo kale siinaysaa dhammaan macaamiisheeda Magaalada New York casriyeyn: laga bilaabo Oktoobar 31, dhammaan duullimaadyada shirkaddu New York/Newark Liberty International Airport, John F. Kennedy International Airport iyo LaGuardia Airport waxaa ku jiri doona doorasho heerka koowaad ah, oo ay ku jiraan 737 MAX-8 iyo CRJ-550 - diyaarad goboleed ee 50-kursi ee ugu horreeya adduunka oo leh kuraasta heerka koowaad iyo adeegyada. United waxay hadda siin doontaa in ka badan 7,000 oo kuraas qaali ah macaamiisha magaalada New York, in ka badan shirkad kasta oo kale, iyo tan ugu badan taariikhda shirkadda.
"Annaga oo duulinaya diyaarado waasac ah, oo casri ah oo ka baxaya agagaarka magaalada New York, kaliya ma siinayno macaamiisheena dabacsanaan iyo doorasho dheeraad ah laakiin waxaan sidoo kale bixineynaa khibrad la isku halayn karo, guud ahaan," ayuu yiri Ankit Gupta, Madaxweyne ku xigeenka Sare ee Gudaha Qorshaynta iyo United Express.
"Macaamiisheenna sida joogtada ah ugu safra Washington, DC, iyo New York waxay noo sheegeen inay qiimeeyaan ku habboonaanta iyo raaxada wax kasta oo kale, United waxaa ka go'an inay bixiso adeegga heerka sare ah ee ay codsanayaan."
United CRJ-550 waa diyaarad goboleed 50-kursi ee ugu horeysa aduunka oo loogu talagalay inay bixiso kuraasta heerka koowaad iyo adeegyada. Asal ahaan loogu talagalay in lagu fadhiisiyo 70 iyo rakaab, United CRJ-550 qaabeynta waxay kordhisaa raaxada macaamiisha.
Adeegga basaska cusub ee United inta u dhaxaysa New York/Newark Liberty International Airport iyo Madaarka Qaranka ee Reagan wuxuu shaqayn doonaa todobo maalmood todobaadkii, iyadoo 18 duullimaad ay bixinayaan ku dhawaad ​​adeeg saacadle ah inta u dhaxaysa 6 subaxnimo iyo 10 galabnimo, in ka badan inta jeer ee diyaarad kasta. United Airlines Waxa kale oo ay ka shaqayn doontaa shan duulimaad maalinle ah inta u dhaxaysa New York/Newark Liberty International Airport iyo Washington Dulles Airport. Duulimaadyada cusub ee u dhexeeya Gegida Diyaaradaha ee LaGuardia iyo Gegida Diyaaradaha ee Washington Dulles ayaa ka dhigi doona tirinta duulimaadka maalinlaha ah ilaa sagaal waxayna bixin doonaan adeeg joogto ah todobada maalmood ee usbuuca inta u dhaxaysa 6 subaxnimo iyo 10 galabnimo.